ပုဒ်မ၅၀၅(က) ဖြင့်အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အကယ်ဒမီအိန္ဒြကျော်ဇင်ရဲ့တူမလေး မေတိုးခိုင် ဖမ်းဆီးခံရ – Cele Top Stars
April 18, 2021 By admin2Knowledge
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. မင်းသမီးချောလေးမေတိုးခိုင်ဟာဆိုရင် လူငယ်ပီပီ သွက်လက်ချက်ချာပြီး အရမ်းကိုထက်မြတ်တဲ့မင်းသမီးလေးပါပဲနော်။ မေတိုးခိုင်ဟာဆိုရင် အခုလတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမှာ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ရင်း ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေတိုးခိုင်က အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့တူမလေးဖြစ်ပြီး မေတိုးခိုင်ကလည်း အဒေါ်လိုပဲသူယုံကြည်ရာကို အမြဲရှေ့တမ်းကနေပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖွင့်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း မေတိုးခိုင်အဖမ်းခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
” မအူဝဲတူမမေတိုးခိုင်ပါသွားတာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ ညီမတင်လိုက်လို့အကူအညီမဖြစ်မှာစိုးလို့မတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ၊ ဖူးအတွက် speak outလုပ်ပေးကြပါဦး၊ sourceကတော့ ညီမပါ 100%၊ family ကိုတော့ညီမ confirmမလုပ်ထားပါဘူး၊ ကြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ညီမစုံစမ်းရသလောက် တင်ပေးတာပါ speak outလေးလုပ်ပေးကြပါ please ” ။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း မေတိုးခိုင်လေး အန္တရယ်ကင်းရှင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်။ဖတ်ရှု့ပေးကြသော ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
Source; Thae Oo Naing
Credit; Famoue Stars
ပရိတျသတျကွီးရေ…. မငျးသမီးခြောလေးမတေိုးခိုငျဟာဆိုရငျ လူငယျပီပီ သှကျလကျခကျြခြာပွီး အရမျးကိုထကျမွတျတဲ့မငျးသမီးလေးပါပဲနျော။ မတေိုးခိုငျဟာဆိုရငျ အခုလတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနမှော အမှနျတရားဘကျကရပျတညျရငျး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ တကျကွှစှာပါဝငျလာတာပဲဖွဈပါတယျ။
မတေိုးခိုငျက အကယျဒမီအိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့တူမလေးဖွဈပွီး မတေိုးခိုငျကလညျး အဒျေါလိုပဲသူယုံကွညျရာကို အမွဲရှတေ့မျးကနပေါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က)နဲ့အမှုဖှငျ့ခံရတာပဲဖွဈပါတယျနျော…။ဒီကနမှေ့ာဆိုရငျလညျး မတေိုးခိုငျအဖမျးခံလိုကျရတာပဲဖွဈပါတယျ။
” မအူဝဲတူမမတေိုးခိုငျပါသှားတာတော့ဟုတျပါတယျ။ ညီမတငျလိုကျလို့အကူအညီမဖွဈမှာစိုးလို့မတငျဖွဈခဲ့တာပါ၊ ဖူးအတှကျ speak outလုပျပေးကွပါဦး၊ sourceကတော့ ညီမပါ 100%၊ family ကိုတော့ညီမ confirmမလုပျထားပါဘူး၊ ကွားတဲ့သတငျးတှနေဲ့ ညီမစုံစမျးရသလောကျ တငျပေးတာပါ speak outလေးလုပျပေးကွပါ please ” ။ ပရိတျသတျကွီးလညျး မတေိုးခိုငျလေး အန်တရယျကငျးရှငျးပွီးဘေးကငျးလုံခွုံဖို့အတှကျဆုတောငျးပေးကွပါအုံးနျော။ဖတျရှု့ပေးကွသော ပရိတျသတျကွီးအားလုံးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
သူမအဖေဖြစ်သူ ဦးခင်လှိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မဟုတ်မမှန်ကောလဟာလသတင်းအမှားတွေပြောနေတဲ့သူကို ပြတ်ပြတ်သားသားသတ်ိပေးလိုက်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်